उत्तर कोरियाले आक्रमण गरे प्रतिरक्षाका लागि २ मिनेट मात्रै – Karnalikhabar
एजेन्सी—उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार परिक्षण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य निकै आक्रमक ढंगले अघि बढिरहेको छ। यसबाट छिमेकी मुलुकहरु दक्षिण कोरिया र जापानले सुरक्षा खतरा अनुभव गरिरहेका छन्। उत्तर कोरियालाई चीन र रुसको बलियो समर्थन छ। उत्तरसँग रुसमा निर्मित सैन्य प्रविधि धेरै छ। वर्तमानको आर्थिक शक्ति चीन उत्तर कोरियाको ब्याकअप शक्ति हो।
अर्कोतर्फ अमेरिकाले समेत उत्तर कोरियाबाट विश्वले असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै चासो देखाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी प्रतिनिधले भनेका छन्, ‘वितेका दुई वर्षमा हाम्रो सबै प्रयासका बाबजुद उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार पहिलेको तुलनामा आक्रमक र खतरनाक बनाएको छ।’
केही विश्लेकको भनाइ छ कि उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन युद्धको पक्षमा छन्। उनी विश्वलाई नै ध्रुवीकृत हुनेगरी युद्धको तयारी गरिरहेका छन्। उनको तयारीलाई खेलाँची लिनु नहुने उनीहरुको तर्क छ। केही विश्लेषक भने उत्तरले युद्ध नचाहिरहेको बताइरहेका छन्।
उत्तरको सैनिक हर्कतले जापानमाथि खतरा भएको जापानी राष्ट्रपति सिंजो आबेले त्यतिबेला बताएका थिए। दूरी छोटो भएका कारण हमला भइहाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जापानसँग २–३ मिनेटभन्दा बढी हुने छैन।
उत्तर कोरियाले युद्ध छेडेको अवस्था कस्तो होला ? राजनीतिक रुपमा विश्वबाट टाढै रहेको उत्तर कोरियाको महत्वकांक्षी परमाणु हतियार योजनाबाट आफूलाई कसरी बचाउने ? अहिले विश्वका लागि यी प्रश्नहरु मुख्य चुनौतीका विषय भइरहेका छन्। उत्तरका लागि दक्षिण कोरिया सबैभन्दा पहिलो निसाना हुनसक्छ। यो नै उत्तरका लागि सबैभन्दा सजिलो लक्ष्य समेत हो।
दुई कोरिया प्राविधिक रुपले अहिले पनि युद्धको अवस्थामा छन्। सन् १९५३ मा कोरियाई युद्ध समाप्त भएको थियो। तर त्यतिबेला दुई देशबीच शान्ति सम्झौता भएन। पछि आएर पनि कुनै शान्ति सम्झौता गरिएको छैन। दुई देशबीच करिब २५० किलोमिटर लामो गैरसैनिक सीमा क्षेत्र छ। दुई कोरियाबीचको सीमा ४ किलोमिटर चौडा छ। यही चार किलोमिटर नोमान्सल्यान्डले दुई देशलाई अलग पार्दछ। यो क्षेत्रको दुवैतिर हजारौं सैनिक तैनाथ गरिएका छन्। सीमामा दुवैतर्फबाट काँडेतार लगाइएको छ। बारुदी सुरुङ बनाइएको छ।
१० लाखभन्दा बढी नियमित सैनिक तथा रिजर्भ सैनिकका साथमा उत्तर कोरियाको जनसेनाले यो विषयलाई निकै सुक्ष्म रुपमा बुझेको छ। उसलाई सीमामा कसरी सैनिक कारवाही गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान छ। दुवै पक्षबाट युद्ध भएको खण्डमा सीमाको तारबारले केही रोक्न सक्ने छैन। सीमाको सुरक्षा घेरा मिसाइल रोक्ने किसिमले बनाइएकै छैन।
दक्षिण कोरियाको ट्रमिनल हाइ अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स (थर्ड) लाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ। थर्डले उत्तर कोरियाको परमाणु हमला रोक्ने क्षमता राख्ने धेरैको विश्लेषण छ। थर्डलाई अमेरिकाले पैसा सहयोग गर्छ। यसको डिजाइन ब्यालेष्टिक मिसाइलबाट भएको हमलाको अन्तिम समयसम्म नष्ट गर्ने गरी गरिएको छ। यो सैन्य सुरक्षामा नयाँ प्रविधि हो। यो प्रविधि सन् २०१७ मा आएको हो। परीक्षणबाट यो सफल हुनसक्ने देखिइसकेको छ।
उत्तर कोरिया तथा उसको सहयोगी चीन दुवै थर्डलाई एउटा उक्साहटको रुपमा लिन्छन्। थर्ड रहेको स्थानमा रहेका दक्षिण कोरियालीहरु अहिले डराइरहेका छन्। किनभने निसाना हुँदा त्यहीँ हुनेछ। दक्षिण कोरियाका रक्षामन्त्रीले आफूसँग रहेका चार वटा थर्ड लन्चर तैनाथ गर्न भनिसकेका छन्। ती सबै अमेरिकाले उपलब्ध गराएका हुन्। यी मध्ये दुई वटाले पहिलैदखि काम गरिरहेका छन्।जापान र उत्तर कोरियाबीच ५०० किलोमिटरको दूरी छ। यस हिसाबले जापान पनि उत्तरको निसानामा पर्नसक्छ।
अगस्टमा प्योङयाङले जापानको आकासमाथि मिसाइल खसालेको थियो। उत्तरको सैनिक हर्कतले जापानमाथि खतरा भएको जापानी राष्ट्रपति सिंजो आबेले त्यतिबेला बताएका थिए। दूरी छोटो भएका कारण हमला भइहाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जापानसँग २–३ मिनेटभन्दा बढी हुने छैन।
जापानसँग पनि दक्षिण कोरियाको चाड जस्तै एक मिसाइल सिस्टम छ। त्यसकै भरमा उसले आउने कुनै पनि मिसाइललाई नष्ट गर्न सक्छ। तर यसको सीमा कम हुन्छ। यो कुनै एउटा स्थानमा प्रयोग हुन सक्छ तर पूरै देशका लागि यो प्रोग हुन सक्दैन। जापानमा समुन्द्र वा जमिनबाट आक्रमण हुँदा डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जापान, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका ती देशहरु हुन् जोसँग नौसेनासँग इजस सिस्टम तैनाथ छ। इजस पनि एउटा इन्टि मिसाइल सिस्टम हो।
यो थर्ड अथवा समुन्द्रमा पठाइने जहाजबाट पनि पठाउन सकिन्छ। यसको अप्ठ्यारो भनेको इजस जहाजलाई सही समयमा उचित ठाउँमा मात्र पठाउन सकिन्छ। यसै कारणले हुनुपर्छ परीक्षणपछि यसको प्रयोग कहीँ गरिएको छैन। उत्तर कोरिया र अमेरिकाको दूरी पनि अमेरिकी सुरक्षाका लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिन्छ। अलास्काबाट यो ५००० किलोमिटर टाढा पर्छ भने सान फ्रान्सिस्कोबाट करिब ९००० किलोमिटर छ। तर प्रविधिको विकासले दूरीको समस्या घट्दै गएको छ।
उत्तर कोरिया यस्तो बम बनाउन चाहन्छ जुन जोसुकै इन्टरकन्टिनेन्टल मिसाइलमा फिट गर्न सकियोस्। यदि यसो भएको खण्डमा अमेरिकामाथिको हमला सहज हुने उसको विश्लेषण छ। हालै परीक्षणपछि उत्तर कोरियाले त्यस्तो बम बनाएको दाबी गरेको छ। सानो आकारको त्यो बमको परिणाम भयावह हुनेछ। हाइड्रोजन बम भनेर उसले सार्वजनिक गरेको त्यो बम सुरक्षा प्रणालीका लागि नयाँ खतरा हो।
उत्तरको यो कदमपछि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा सिस्टम पूरै समीक्षा गरेको छ। अमेरिकाले त्यसलाई निस्क्रिय पार्ने किसिमको सिस्टम बनाउन थालेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले पूरै अमेरिकी सैन्य सुरक्षा प्रणाली समीक्षा गर्न आदेश दिएका छन्। अमेरिकासँग पहिलैदेखि मिसाइल पत्ता लगाउने तथा त्यसलाई नस्ट गर्ने सिस्टम छ। तर सुरक्षा विश्लेषकका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली भरोसा गर्न योग्छ छैन। बीबीसीका रक्षा संवाददाता जोनाथन मार्कसले केही महिनाअघि यस्तो विश्लेषण गरेका थिए। अमेरिकाको तुलनामा उत्तर कोरियाली मिसाइल आधुनिक भएको उनको ठहर छ। यो बाहेक अमेरिकाका लागि गुआम क्षेत्रको सुरक्षा पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। अमेरिकी सुरक्षा फौज रहेको यो ठाउँ उत्तर कोरियाको निसानामा छ।
यो टापुमा अमेरिकाले पहिलैदेखि थाड सिस्टम राखेको छ। अमेरिकी सैन्य अधिकारी भन्छन्, ुकिम जोन उनले पहिलै अमेरिकामाथि हमलाको चेतावनी दिए। अब अमेरिकालाई अगाडिको कदमको प्रतीक्षा छ।
अघिल्लो - नेपाल आइडलमा यो हप्ता नि:शुल्क भोट गर्न पाइने, यस्तो छ व्यवस्था
बसमाथि आक्रमण भएपछि अष्ट्रेलियन टिमको सुरक्षा कडाइ - पछिल्लो